Waa maxay qeexitaanka saacad caqli-gal ah oo leh biyo-qabad la'aan? Suurtagal ma tahay in biyaha lala xiriiro waqti dheer? Xaqiiqdii, heerka boodhka iyo biyuhu ee alaabada elektaroonigga ah guud ahaan waa la muujiyey b ...
Waa maxay kormeeraha garaaca wadnaha?
Waxa loogu yeero kormeerka garaaca wadnaha waa saacad si sax ah u duubi karta garaaca wadnaheena waqtiga dhabta ah inta lagu guda jiro jimicsiga. Doorka kormeeraha garaaca wadnaha ee jimicsiga ujeedada leh waa mid aad u muuqata. Waxaa jira laba mabaadi'da guud ee cabbirka miisaanka garaaca wadnaha, midna waa wadnaha wadnaha ...